गेबोरोन आकर्षण - बोत्सवाना - 1aviagem.com
अघिल्लो पोस्ट: हामी तेस्रो विश्व युद्ध कसरी जित्न सक्छौं? उत्तर तपाईको तर्फ हुन सक्छ।
अर्को पोस्ट: यो कसरी सम्भव छ सार्वजनिक परिवहन को लागी नि: शुल्क? - एस्टोनिया - तल्लिन
पोष्ट गरिएको 28 जनवरी 2020 द्वारा रोमोमो लुकाना
अफ्रिकाको पहिलो यात्रामा मैले दक्षिण अफ्रिका र बोत्सवानाको बीचमा सीमा पार गर्ने निर्णय गरें। जे भए पनि, ब्राजील अफ्रिकी महाद्वीपबाट अलि टाढा छ। त्यसोभए यो राम्रो विचार जस्तो देखिन्थ्यो कि यो सीमा पार गरेर हेर्नुहोस् कि बोत्सवाना दक्षिण अफ्रिका जस्तै थियो कि थिएन। र म परिणामको साथ धेरै सन्तुष्ट छु कि तपाईंले अब पछ्याउनु भएको छ।
* ब्राजिलका लागि भिसा लिन आवश्यक छैन, भन्सार मार्फत जानु र प्रवेश टिकट लिन आवश्यक छ। राहदानीको टिकटको लागि २ P पुलस (BTW) शुल्क पनि तिर्ने गर्छ।
* तर तपाईसँग आपतकालीन पासपोर्ट छ भने तपाई जानु अघि भिसा लिन अनिवार्य हुन्छ।
बोत्सवाना भ्रमण गर्न भिसा चाहिने देशहरूको सूची दूतावासको वेबसाइटबाट पाउन सकिन्छ:
** पहेलो ज्वरो बिरूद्ध खोपको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ।
अब जब तपाईलाई बोत्स्वानाको देशमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ, तपाईसँग पहिले नै तपाईको भिसा, खोप प्रमाणपत्र, तपाईको राहदानी छापिएको छ र तपाईले माथि दूतावासको वेबसाइट भ्रमण गरिसक्नु भएको छ, यात्रामा जाऔं!
गेबोरोनमा के गर्ने?
१- गभोरोनमा गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको यो महसुस गर्नु हो कि तपाईं अब दक्षिण अफ्रिकामा हुनुहुन्न। बसमा भएका मान्छेहरूमा कसरी व्यवहारिक परिवर्तन देखा पर्‍यो त्यो हास्यास्पद छ। एउटा नयाँ वातावरण सिर्जना गरियो, यसले यो संकेत गर्‍यो कि हामी नयाँ देशमा थियौं, दक्षिण अफ्रिका भन्दा यसको आफ्नै संस्कृति र संस्कृतिसँग। दुर्भाग्यवश यो बोर्डरको तस्वीर लिन निषेध गरिएको छ, त्यसैले बाटो भनेको बसमा हुनेहरूसँग सन्तुष्ट हुनु हो।
२- कम्तिमा दुई बोत्सवाना नागरिकहरू, वा बोत्सवानालाई भेट्नुहोस् ...
र किन यो गेबरोनमा गर्नु पर्ने चीजहरूको सूचीमा छ? किनभने म उनीहरूबाट मोहित भएँ!
यसको दयालुता र पर्यटक र विदेशीहरूलाई राम्रो स्वागत सामान्य भन्दा बाहिर छ। मसँग उनीहरूसँग व्यावहारिक मानवता वर्ग थियो। राम्रो सामरीको दृष्टान्त जस्तो केहि। यस अवस्थामा म चाहिएको कुरा थियो। राम्रो स्वागत भएका देशहरूको सूचीमा (जसमा म विश्वभर होइन,) अन्य देशहरूसँग बाँधिएको ठाउँमा सजिलै राख्छु जसले पर्यटकहरूलाई राम्रो स्वागत गर्दछन्। क्यानाडीयनहरू, क्याम्बोडियनहरू, ब्राजिलियालीहरू र अहिले बोट्सवान्सहरू पनि।
हामी सिमानामा पुग्नु अघि नै, बसमा भएका मानिसहरूले सामान्य व्यवहार गरेका थिए। जब उनीहरू साथीहरू हुन्छन्, तिनीहरू बाटोमा कुरा गर्छन्, जब तिनीहरूले एक अर्कालाई चिन्दैनन्, तिनीहरू चुपचाप बस्छन्। र सीमामा २ घण्टा भन्दा बढी पछि, बसको सर्वेक्षणको हकदार व्यक्तिहरूको पर्याप्त संख्या र ढिलाइले जुन हाम्रो यात्रालाई hours घण्टादेखि .2 ..7 घण्टामा परिवर्तन गर्‍यो, मैले पहिलो बोत्सवानो दम्पतीलाई भेटें। मोम्पाटी र केहिलो। (मलाई आशा छ मैले यो सहि भयो)। मोम्पाटीले यस विषयलाई पहिलो स्थानमा ल्यायो। उनले भने कि उनी घर आउँदैछन् र उनी जान्न चाहन्छन् कि ब्राजिलका पर्यटक गेबरोनमा के गर्दैछन। र कुन स्टेसनमा म बसबाट ओर्लन्छु। मैले जवाफ दिएँ कि मलाई अझै थाहा छैन कि म के गर्दैछु, र म गेबरोन स्टेशनको अन्तिम बस स्टेशनमा जान्छु। त्यहाँ म एक वाइफाइ खोज्नेछु उबर सुरु गर्न र होटल पुग्न।
यो त "जादू" भयो। उनले देखे कि मलाई त्यस देशको बारेमा केही पनि थाहा थिएन र मलाई मद्दत गर्न इच्छुक थिए।
मोम्पाटीले मलाई समझाई कि उबर त्यहाँ काम गर्दैन। र त्यो मलाई स्थानीय अनुप्रयोग चाहिन्छ। उनले मलाई यो पनि भने कि टर्मिनलमा कुनै वाइफाइ थिएन। (चाँडै म सजिलैसँग होटल पुग्न सक्दिन)।
तर उनले मलाई चिन्ता नगर्न भने, केहिलेसँग कुरा गरे र उनी मेरो होटेलमा बोलाउन राजी भए टेरा कोट्टा दृश्य अतिथिहरु। उनीहरू सहमत भए कि म अन्तिम सिजनभन्दा पहिले एक बिन्दुमा आउँछु र होटेलका कर्मचारीहरूले मलाई त्यहाँ लैजान्छन्। उनीहरूले यो पनि बताए कि सीमामा त्यहाँ ढिलाइ भएको थियो र यसैले म अझै आइपुगेको थिएन।
मोम्पाटी र केहिलोले एक राम्रो काम भन्दा बढि गरेका थिए। तिनीहरूले मलाई समस्यामा फस्नबाट जोगाए किनभने मसँग सेल फोन स .्केत थिएन, होटेल पुग्न कुनै बाटो थिएन, र स्थानीय मुद्रा भएको कुनै “जम्प” पनि थिएन। मेरो वालेटमा १०% ब्याट्री र "" रेन्ड "भएको सेल फोन थियो, यसले स्थानीय भाषा नजान्ने तथ्यमा थप्यो। र उनीहरूका अनुसार म अझै गैबरोन (बस स्टेशन) को सबैभन्दा खतरनाक बिन्दुमा पुग्न योजना गर्दै थिएँ। र यो धेरै अँध्यारो थियो। यदि मैले पैदल हिड्ने निर्णय गरेमा
मोम्पाटी होटेलका स्टाफलाई हस्तान्तरण गर्नु अघि, उनले मलाई टिप्स पनि दिए: "यदि तिमीले ग्यारोबोनमा बार्बेक्यु लिन सक्छौ भने तिमीलाई पक्कै मनपर्नेछ"। उसले मेरो भाषा बोले, बार्बेक्यु सहि भन्दा राम्रो केहि छैन?!
म केवल भन्न सक्छु कि ईश्वरले मलाई खतराबाट छुटाउन र आउँदै गरेको यस नयाँ देशमा मलाई स्वागत गर्न काम गर्नुभयो।
3- टेरा कोट्टा दृश्य अतिथि घर मा रहनुहोस्
त्यसैले अब यो ब्राजिल पर्यटक होटेल स्टाफको रेखदेखको जिम्मामा थियो।
र तिनीहरू (मोदिरी र म्यागी) लामो समय पर्खिरहे, हेर ?! पहिलो कल देखि बस को आगमन को लागी, पर्याप्त समय बित्यो। तर तिनीहरूले ब्राजिलियन टुरिष्टमा नारंगी सुटकेसको साथमा हार मानेनन्। हो, यसैले मैले तिनीहरूलाई आफूलाई चिह्न लगाएँ (सुन्तलाको झोलाको साथ)। म आईपुग्दा तिनीहरू मलाई पर्खिए र मलाई होटेलमा लगे। यो आइपुगेको धेरै ढिला भयो जब हामी आइपुगेका थियौं र नुहाउन र आराम गर्न मैले चाहेको थिए।
- रिभरवाकमा जानुहोस्
रिभरवाक एक शपिंग सेन्टर हो जहाँ तपाईं शहरको अन्वेषण सुरु गर्नु अघि तपाईं आफ्नो जीवनलाई सुल्झाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं मुद्रा एक्सचेन्जबाट पैसा (स्थानीय मुद्रा) फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ यदि तपाईंसँग दक्षिण अफ्रिकाबाट पर्याप्त रान्डहरू छन् र पुलास जान चाहनुहुन्छ भने। त्यहाँ खाने कोठा, शिल्प र सेल फोन चिप किन्नको लागि स्टोर छ, त्यसैले तपाईं सिग्नल पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईंको स्थानमा फिर्ता जान सक्नुहुन्छ।
सेल फोन चिप चेतावनी विश्वको लगभग कहिँ पनि, सेल फोन चिपले दर्ता गर्न र सक्रिय रहन समय लिन्छ। ई।,। दुर्भाग्यवश नयाँ चिप सक्रिय हुनको लागि मसँग लामो समय थिएन। यसले hours 48 घण्टा लिन सक्दछ। र यहाँ बोत्सवानाको टेरा कोट्टाका जनताबाट एकतामा अर्को पाठ थियो। कर्मचारीहरू मलाई मद्दत गर्न साँच्चै इच्छुक थिए! केटाले मलाई आफ्नो चिप उधारोमा राख्यो, त्यसैले मसँग एक सक्रिय चिप हुन्छ, र केहि पनि होटेलमा बोलाउन सक्छु। साथै, मेरो सेल फोन खोल्नको लागि, रिफिल्वेले मलाई उनको कानुनी कर्जा दिए। किनभने फोन मात्र चिप हटाउनको लागि धेरै पातलो कुराको साथ खोलिन्छ।
× अलर्ट खारेज गर्नुहोस्
गेबोरोनमा हामी केटाहरू छ!
म पर्यटकीय रूपमा के कुरा गर्दैछु भनेर जान्न तिनीहरू सबै उत्सुक थिए। मलाई आशा थियो कि त्यहाँ एउटा टुरिस्ट बस हुनेछ जुन शहरको सानो टुर लिनेछ, जस्तो कि हामी जोहानेसबर्ग, केप टाउन, न्यु योर्कमा छ… दुर्भाग्यवस, यो सेवा अझै गाब्रोनमा अवस्थित छैन। यसैले मोडिरी चिप स्थापना भएपछि मैले अनुसन्धान सुरु गरें। र त्यहाँबाट यो सम्पूर्ण स्क्रिप्ट आयो!
होटेलबाट मोदीरीले सिटहरू क्रमबद्ध गरी व्यवस्थित गरे जसमा स्क्रिप्टको लागि मतलब हुनेछ।
मेग्गीले स्थानीय अनुप्रयोगको लागि अनुरोध गरेर पनि धेरै मद्दत गर्‍यो, जुन उबर जस्तै छनौट स्क्रिप्टको साथ एक कार। र उनी आफैले यस कारलाई खारेज गरिन्, कुनै व्यक्तिलाई चिन्न बोलाउन समाधान प्रदान गर्दै। किनभने उनले याद गरिन् कि चालक कुनै चीजहरूमा संलग्न भएको थियो। यसले मलाई मोफाटलाई चिन्ने अवसर दियो। मोफ्याट त्यो केटोको नाम हो जसले एक स्थानीय टूर गाईडको रूपमा काम गर्‍यो। उनी र उनको शक्तिशाली गुलाबी कारले दिन बचायो!
Go- बोटुसाना संग्रहालयमा जानुहोस् (बोट्सवाना संग्रहालय)
गेबरोनको बोत्सवाना संग्रहालयले हामीलाई विवरणहरूको शृंखला ल्याउँदछ जुन हामीलाई देखाउँदछ कि यो देश कसरी संसारभरिका मानिसहरू भन्दा धेरै समतावादी छ।
संग्रहालयमा तपाईले Kgotla को नक्कल देख्न सक्नुहुनेछ। Kgotla के हो? यो बैठकहरू र महत्त्वपूर्ण शीर्षकहरूको छलफलको लागि सिर्जना गरिएको सार्वजनिक ठाउँ हो। यस ठाउँमा, लि gender्ग, छालाको र ,्ग, धार्मिक पंथ, आदि जस्तोसुकै भए पनि, जनसंख्याले भोट हाल्ने प्रश्न गर्न सक्दछ। यो एक सार्वजनिक संसदको रूपमा काम गर्‍यो, जसले सांसदहरू हुनुको सट्टा जनता आफैंले मतदान गरे। गणतन्त्रको स्थापना भएदेखि बोत्सवानाले लोकतन्त्रमा पहिलेदेखि नै विश्वास राखेका थिए र जनता आफैंले भोट दिन सक्ने थिए। महिलाहरू पहिले नै आवाजको लागि हकदार थिए, जसरी पुरुषहरू पनि थिए, साथै उनीहरूमध्ये कोही-कोही यस ठाउँमा जनताको नेताको रूपमा चुनिएका थिए। (शासकहरू, वा उनीहरूले यसलाई Kgosi भनिन्छ)!
संग्रहालयमा हामीसँग गोरुको गाडीको प्रतिकृति पनि छ, र रेलहरूको समय र घरहरू पनि।
C- CBD मा तीन Dikgosi स्मारक हेर्नुहोस्।
सीबीडीको केन्द्रीय वर्गमा पनि बोत्सवानाको बारेमा धेरै उत्सुकताहरू छन्। यसमा हाम्रो स्मारक छ: "तीन डिकगोसी स्मारक" जुन मूल रूपमा तीन नेताहरू हुन्: खामा तृतीय सेबेल प्रथम र बाथेन प्रथम जो देशको क्षेत्रको सीमांकनको लागि जिम्मेवार थिए। प्रत्येकले फरक कुलको प्रतिनिधित्व गर्थे। पहिले, तिनीहरू छुट्टै जाति थिए र एउटा कुलको राजाको रूपमा शासन गर्थे। तर जब उसले देखे कि उत्तर र दक्षिणबाट उसको भूमिमा उन्नति भएको थियो। कि तिनीहरू अंग्रेजी डोमेनको अधीनमा थिए र उनीहरूले बुझे कि महानगरको मानसिकताले उनीहरूलाई विभाजित राख्नु थियो ताकि उनीहरूको भूमिलाई अन्वेषण गरी उपनिवेशका रूपमा जारी राख्नु पर्ने थियो। उनीहरूले एक ठाउँमा भेला भएर युनाइटेड किंगडम जाने निर्णय गरे, रानी र चान्सलरसँग कुरा गर्ने जिम्बावे र दक्षिण अफ्रिकाको कम्पनीबाट यस क्षेत्रलाई छुट्टिए भनेर दावी गरे।इन् नयाँ क्षेत्रलाई बेन्चुआनाल्याण्ड प्रोटेक्टरेट भनिन्थ्यो। । जिम्बाब्वे र दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका खतरासहित आफ्नो क्षेत्रको अधिकारलाई छुट्टिएर र सीमांकन गरेपछि र युनाइटेड किंगडमबाट स्वतन्त्र हुन, तिनीहरूले आफ्नो सिंहासन त्यागेर बोत्सवाना गणतन्त्रको गठन गरे। (१ 1960 XNUMX० मा)।
वर्गमा बोत्सवानाको गठन र स्वतन्त्रतामा सहयोग गर्ने अन्य नेताहरूलाई पनि देख्न सकिन्छ।
माइकरबेलो (ग्लोबल उत्तरदायित्व)
- बोत्सवाना शिल्प
बोत्सवाना शिल्प एक स्थान हो जहाँ स्थानीय हस्तशिल्पहरू बिक्री गरिन्छ, तपाईं धेरै फरक आकार, सामग्री र मूल्यहरूको विभिन्न स्मृति चिन्ह फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
- Linga Longa मा खाजा
बार्बेक्युको संकेत सुनेपछि, मैले बारबेक्युको रूपमा बनेको मासु खान्ने निर्णय गरें। र हेर, यो यसको लायक थियो! स्वादिष्ट मासु र राम्रोसँग बनेका साइड डिशहरूको बारेमा सोच्नुहोस्। सिफारिस लिंगा लa्गाको लागि हो।
- Kgale पहाड़ी (माउन्टेन)
Kgale पहाड १,२1.287 मिटर अग्लो पहाड हो। विगतमा, टिभी टावर यसको माथि थियो। आज यो पर्यटकीय स्थल हो शहरको राम्रा दृश्यहरू हुन। Kgale पहाडको अर्थ: सुत्ने विशाल चढ्नको लागि आरोहणको औसत स्तर आवश्यक पर्दछ।
१०- गेबोरोन बाँध (याच क्लब)
र गेबरोनको हाम्रो यात्राको अन्त्यमा हामीसँग याच क्लब छ, जहाँ गाबरोन बाँध अवस्थित छ। यो पानी भण्डार गर्न प्रयोग गरिन्छ र फुर्सतका गतिविधिहरू पाउन पनि सम्भव छ। तर यो शहरका बासिन्दाहरूको लागि बढी तयार छ किनकि यसमा प्रवेशका लागि सदस्यता कार्ड चाहिन्छ। भाग्यवस हामी भित्र पस्न सफल भयौं, तर यो छिटो छिटो आउनेछ भन्ने कुराको साथ। (किनकि मसँग सदस्यता कार्ड छैन)। केहि तस्वीर ल्याउन पर्याप्त छ।
राम्रो व्यक्तिहरू, र हामी यहाँ बोटोसुआनाको राजधानी गेबरोनमा गर्नका लागि 10 चीजहरूको सूची पूरा गर्दछौं। एक पटक फेरि म टेरा कोट्टा गेस्ट हाउसमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, (मोडिरी, म्याग्गी, रिफिलवे) किनभने यो तपाईलाई धन्यबाद छ कि म यस शहरको भ्रमण गर्न र यो पढ्नेलाई तपाई सबैलाई ल्याउन सक्षम भएको हुँ। धेरै धेरै धन्यबाद, तपाईको ब्राजिलियन मित्र "सिल्वा" बाट।
सम्झना, होटल मा रहनको लागि लिंक यो हो:
टेरा कोट्टा दृश्य अतिथिहरु
र जो हाम्रो ब्लग अनुसरण गर्न र प्रोत्साहन दिन चाहान्छन्, केवल रातो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र ईमेल पुष्टि गर्नुहोस्। यो नि: शुल्क हो र यो गरेर तपाईं यस ब्लगलाई जारी राख्न मद्दत गर्नुहुन्छ। र तपाईं मा सामग्री ल्याउन।
अधिक जान्नको लागि, तलको विश्वमा क्लिक गर्नुहोस् र अन्य पोष्टहरू चिन्नुहोस्।
कसरी बोट्सवाना बोटुसेनेसेस गाबोर्ने गेबोरोन बाँध Kgale पहाड संग्रहालय के गर्ने नदी वायु टेरा कोट्टा तीन Dikgosi स्मारक